0	September 21, 2015 1:20 PM
via SA: Zim govt property auctioned for $300k – NewZimbabwe 21 September 2015
WHITE farmers evicted from their land in Zimbabwe won a symbolic victory Monday when a government-owned house in Cape Town was sold to pay compensation, a lawyer involved in the case said.
The auction of the house, which went for 3.76 million rand ($282,000), was the final step in a complicated case that has been fought through the South African courts for years by a group of Zimbabwean farmers.
Zimbabwe government representatives attended the auction, but did not bid, he said.
Zimbabwe fought the judgement through to South Africa’s Constitutional Court, which confirmed in a landmark judgement in 2013 that the farmers could sue in South African courts for compensation and attach Zimbabwe­ government assets in the country.
Three other Zimbabwean properties targeted by AfriForum were declared to be covered by diplomatic immunity, while the Cape Town house had been rented out commercially and was therefore liable to seizure, Spies said.
Mugabe’s land reforms, launched in 2000 and accompanied by violent evictions of thousands of white farmers, were aimed at redistributing farms to landless blacks.